Ipeyinti engcono kakhulu yePasels
Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi IiNkonzo zoPawulo
Ukukhethwa kwam iinkqubo ezintle ze-easels ezikhoyo.
I-easel efanelekileyo yepeyinti ayithethi, kwaye ezinye ziqinisekileyo ngolu hlobo lwentengo apho ityalo-mali. I-studio efanelekileyo ye-studio izokuhlala ixesha elide, mhlawumbi nayo yonke impilo yakho yobugcisa. Musa ukunyanzeliswa ukuba uthenge enye kwimithi enqabileyo (iya kuwufumana upende phezu kwayo kungekudala kamva) kwaye ukhangele ukuba akunzima ukuba usebenzise ukuzonda ukuyisebenzisa.
Musa ukuvumela umntu ukuba akukholise ukuba wena kunye nobugcisa bakho akufanelekile ukutyala imali! I-easel ingenzi nje ukudweba lula njengoko ibhodi okanye i-canvas ihlala kwindawo, kodwa yenza ukuba uzivele ukuba uthathe elinye inyathelo ekuzalisekeni amaphupha akho obugcisa.
I-Easel ehamba phambili yeeNkcazo zoTyhila: I-H-Frame Easel
Ifoto © Marion Boddy-Evans
Ndine-H-frame-easel kwi- studio yam kwaye ibe yintsebenziswano yothando iminyaka. I-system ye-ratchet (yiphuma, yiphakamise / yehla inotshi, uze uvumeleke ukuhamba) ukuhambisa ishedyuli i-canvas ihlala phezulu kwaye iphantsi. Ukubonelela ngokuma kumgangatho wamanqanaba, i-H-frame-easel isigxina. Unokufumana ubuhlungu ngebhasi okanye ummese kwinqanawa kwaye i-easel ayiyi kuguqa. Ukuba i-tovas iqiniswe kwisitoreji kakuhle, yodwa inkulu kakhulu. Imilenze ayiyi kuwela ngengozi xa uhamba ngokubhekiselele kuyo (njengoko kunokwenzeka nge-A-frame easel).
• Ikhefu lokukhusela likhutshwe njani? Ingenziwa lula?
• Ingaba umphezulu we 'mast' uya kutshitshiswa? Ndiyakunqumla ncinane xa kuyimfuneko?
• Nguwuphi ubungakanani obuninzi obuza kuthatha?
• Ingaba iyawa phantsi isitoreji sokugcina okanye ukuhamba?
H-Frame Frame Top Easel
Ifoto © Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Ngaphambi kokuba ndibe nesithuba se-easel e-H-frame efanelekileyo, ndasebenzisa i-H-frame table-top. Kuyilo lwakhiwo olufanayo, olujoliswe ukuba lusetyenziswe xa uhleli etafileni (okanye nangaphantsi) kunokuma phambi kwayo. Ngokuqhelekileyo ndigcina yam kufuphi ne-easel yam ephezulu, phezu kwesifuba sabadwebi, ngokuqhelekileyo enomsebenzi oqhubekayo kuyo. Kodwa njengoko iphothile iphofu ndiyaziwa ukupakisha phezulu kwithwalo emva kwimoto xa siye eholide.
I-Sketching Easel elula
Umfanekiso: © 2007 Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc
Ndinee-easel yesithathu, i-tripod easel elula kakhulu ekhupha encinci kwi-bag yekhwama, ukusetyenziswa kwepeyinti kwiholide okanye xa ndiphuma ngaphandle. Imayini njengoko isisiseko, kodwa yenza umsebenzi. Kuyinto encinane ukuma ukupenda kuyo yonke imini (kodwa andiyikwenza njalo), kwaye ke ukukhanya umoya uthanda ukuwuthabatha (Ndiyicombulula ukuba ngokuphumla unyawo emlenzeni omnye).
I-Easel yoPhando oluBalulekileyo
Umfanekiso ngokufanelekileyo ngeBlick Art Materials
Ukuba ubungakanani bakho obuqhelekileyo buyinkulu kwaye unayo indawo, ungatyala kwi-easel enkulu okanye ngaphezulu kwe-easel kunye ne-winch okanye i-pulleys ukulungiswa ngokulula phezulu nangaphezulu, iivili zokuhambisa i-easel ngokukhawuleza, kwaye mhlawumbi i-masts ezimbini ekuxhaseni ityhubhu, kungekhona enye. Khangela ukutshilwa kwevili kunye nendawo ephezulu yokwenza i-takevas iya kuthatha, kunye nobunzima. Le ndlela yokugqibela ibalulekile ukuba udwebe kwipaneli yeenkuni okanye usebenzisa izinto ezinzima kwimifanekiso yeendaba .
Iipaseli zeZithuba eziNcinci
I-easels frame iyaziwayo kwizikolo zobugcisa ngenxa yokuba zipakishe kalula. Ifoto © Marion Boddy-Evans
Ukuba indawo idibanise okanye ufanele udibanise ekupheleni kweseshoni nganye yokupenda, jonga kwi-easels enye okanye nokuba unendawo encinci ye-A-frame, kodwa nangona ayikho le mizobo izinzile njengeH -iname easel.
Iipetroli zokuPrafa zonke
Ukuba akukho nendawo okanye imali ingxaki, ngaba njani malunga ne-easel / desk / isifuba-se-drawers kwi-studio yakho? Isikhundla sokugcinwa kakuhle kwezinto zokupenda , i-easel yokusebenza, kwaye kumnandi ukujonga kwakhona. Isithomboniso sibonisa ukuba kufakwe kwiluhlu lwam Iingcebiso Zemibulelo Yabarhwebi Xa Imali Ayikho Injongo , kodwa iincinci, izitishi zokudweba eziphantsi kwexabiso, zikhoyo.
I-pochade easel ibhokisi elincinci apho isiqhekeza sisebenza njenge 'easel' yokubamba iipaneli ezincinane zokupenda, kunye nezantsi libonelela indawo yokugcina iipaliti ezimbalwa, iibhulashi kunye nepaneli encinane . Ukuba uya kubhala uphi nawuphi na umoya, khangela enye nge widget ukuze ugcine isiqhekeza sivuliwe. Qiniseka ukuba ukhangele ipaneli yohlobo oluphezulu oya kulusebenzisa (luya kuba luncinci kunebhokisi ngokwayo).
Ibhokisi lebhokisi lebhokisi lifana ne-easel yedeskithophu efakwe kwibhokisi yokugcina yamaphepha. Khangela ukuba iindawo zokugcina iipalati zivuleka ngokuzenzekelayo xa i-easel iphakanyisiwe, yindlela evuleka ngayo (kumqolo okanye kwicala?), Indlela egcinwe ivalwe ngayo xa uphatha ibhokisi lebhokisi, kwaye yeyiphi i-height yevasti eya kuthatha. Uzakufuna itafile ukubeka ibhokisi lebhokisi, okanye isitulo ukuze uhlale nalo kwipuphu yakho kodwa le nto iyanzima.
I-easel yesiFrentshi ifana nebhokisi lebhokisi lebhokisi leemilenze ekuphumayo ukuze ulethe i-easel ibe yindawo ephakamileyo yokudweba xa umile. Ukuba uya kubeka umzobo kwindawo eninzi kodwa ungahambi kakhulu ukuya kukwenza njalo, yindlela yokukhetha. Kodwa ukuba uhamba ibanga elide, lingaba nzima kakhulu ngakumbi xa lizele iipende. Hlola ubude obuphezulu be-easel xa imilenze yandiswa kwaye kulula kangakanani ukwenza.
Ifoto © 2010 Wilton Nelson
I-easel windmill yenzelwe ukuguquka, ikunike ukufikelela okulula kunoma iyiphi nayinye inxalenye yempuphu yakho kuba ujikeleze nje ukufikelela kuyo. Ungaphinde uphakamise i-easel yokumisela umoya uze ubeke umzobo wakho. Ifoto apha ifumaneka kwi-studio ye-windel e-studio yaseWilton Nelson. Uthi: "I-windmill i-easel ijika kwaye ilandelelanise ukuba ifanelane nayiphi na imivimbo enqwenelayo kwaye iyamangalisa ukuba nayo."
I-E-Commerce Content inzimeleyo kwimixholo yokuhlela kwaye sinokufumana imbuyekezo ngokuphathelele ekuthengeni kwemveliso nge-links kule khasi.
Funda malunga Nezithako kwiPaint Acrylic
Yintoni I-Art Canvas Ndiyayisebenzisa?
Umbuzo ofakiwe kwigrama
Umthetho obaluleke kakhulu kwiScuba Diving: Ungalokothi Ubeke Ubomi Bakho
URené Magritte: I-Principle yoKumnandi
Juz '27 yeQuran
Indlela iMozulu neMimoya kwiNtshonalanga ne-Southern Hemispheres ehluke ngayo
Iingcebiso ezi-7 eziphezulu kwiPainting Landscape
Inkcazo yamandla eKhemikhali
I-Top 10 yePrint Spector Time Moments
Ingaba i-Study Show ibonisa ukuba ukukhanyisa kwiBabele kulungile kwiMpilo yabantu?
Iikholeji ezisixhenxe zoSondlo - Imvelaphi yeMbali
I-Virgo-Pisces Moon IiNodes kwiShadi lokuzalwa
Ingqwalasela ye-Classical Rhetoric
Imfazwe yaseFort Niagara kwiMfazwe yaseFransi neyamaNdiya